एमसीसी पढेका मान्छे त्यति भेटिनँ, MCC सम्झौता खोजेर पढे हुन्छ भन्नुहुन्छ -प्रधानमन्त्री ओली…हेर्नुहोस!
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी स,हायता अ,नुदान प्र,स्ताव एमसीसी बुझ्ने मान्छे आफूले नभेटेको बताएका छन् ।राष्ट्रियसभामा सां,सदहरूले उठाएको प्रश्नको ज,वाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मान्छेहरूले पढे हुन्थ्यो नि ! ल,हैलहैमा लागेको छ । देशमा विकास हुन लाग्यो भन्ने चिन्ता हो ?’
अहिले केही केहीले हल्ला चलाएका छन्, पढ्न अ,ल्छी लाग्छ कि के हो ? एमसीसी पढेका मान्छे त्यति भेटिनँ । एमसीसी स,म्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ । पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि वि,रोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चि,न्तन हो ?
खुट्टाले टे,केर हिंड्न छाडेर टाउकाले टेकेर हिंड्ने, हातले टेकेर खुट्टा ठाडो पारेर हिंड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ ? खुट्टाले टेकेर हिंड्नु पर्छ । खुट्टाले टेकेर हिंड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ, त्यो प्रबन्ध पढेर ठीक बेठीक यहाँयहाँ छ भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो ।लहैलहैमा लौ अमेरिकी से,ना आउने भयो, कहाँ पढ्छन् ? के पढ्छन् ? कागले कान लग्यो भनेर भन्दा, लाँदा त दु,ख्छ होला नि ! दु,ख्या छैन भने होइन होला नि भन्ने थाहा पाउनु पर्‍यो नि पहिला । दु,ख्या छैन तै पनि सुटुक्कै लगेछ कि भन्ने हो भने पनि छाम्नु पर्‍यो नि, मेरो पनि कान छ कि छैन भनेर ? दु,ख्यो दु,खेर वास्ता नगर्ने, छ कि छैन नछाम्ने लहैलहैमा कुद्ने यो प्रवृत्ति अचम्म लाग्छ ।
अहिले सडकको पनि विषय बनेको छ, अन्तको पनि विषय बनेको छ । यहाँको सा,न्दर्भिक विषय नभएकाले म धेरै जान चाहन्नँ । तर, पढे हुन्थ्यो नि ! स,म्झौतामा के लेख्या छ ? के यस देशमा विकास हुन आँटयो भन्ने चि,न्ता हो ? के यस देशमा विकासका लागि अ,नुदान आयो भन्ने चि,न्ता हो ? ठीकै छ यस विषयमा माननीयहरू समक्ष मेरा वि,चार कुनै समय राख्ने छु ।